Waa maxay summada qalabka musqusha ee wanaagsan?
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Waa maxay astaanta qalabka musqusha ee wanaagsan?
2020 / 10 / 22 QoondayntaTilmaamaha qasabada 12755 0
Qurxinta way adagtahay, gadashaduna way ka dhib badan tahay. Gaar ahaan qalabka musqusha sida qalabka musqusha ee leh shuruudo culeys xambaarsan oo u baahan in lagu rakibo dusiyeyaasha, dadka intiisa badani way ka cagajiidayaan inay qaadaan tallaabada ah inay beddelaan ka dib rakibidda, sidaa darteed waxay si gaar ah taxaddar u yeelanayaan markay wax iibsanayaan.
1. Falanqaynta noocyada iyo shaqooyinka qalabka musqusha
Waxaa loo kala saaraa ujeedo, qalabka musqusha waa wax caadi ah: baararka / giraanta, tuwaalada tuwaalka, dambiilaha geeska, rugaha tuwaalka waraaqaha, burushyada musqusha, iwm. Waxaa loo qaybiyaa aagag kala duwan oo shaqeynaya ee musqusha, taas oo aan hagaajin karin kaliya ka faa'iideysiga booska, laakiin sidoo kale nadaafad u soo qaado musqusha. Dareenka amar.
Sannadihii ugu dambeeyay, hudheelada ama musqulaha qoyska, muraayadda noocan oo kale ah ee darbiga lagu dhejiyo oo leh ulaha telescopic-ka ayaa noqotay caan - muraayad caadi ah iyo muraayad weyneeye, kuwaas oo ku habboon abuurista qurxiyo aad u fiican. Sidoo kale waa qalab musqusha oo waa mid saaxiibtinimo u leh dadka jecel qurxinta.
Waxaa jira noocyo badan oo qalabka musqusha ah, mid walbana wuxuu leeyahay shaqooyin wanaagsan oo u gaar ah. Si loogu adeegto suuqa loona xalliyo dhibcaha xanuunka ee ay la kulmaan dadka isticmaala nolosha, ganacsiyada badani waxay sii wadaan cusbooneysiinta, hagaajinta iyo kordhinta qaababka cusub ee waxqabadka.
Waa kuwan qaababka qaarkood ee mudan in la tixgeliyo si aan kula wadaagno, kuna soo dhawow inaad ka tagto farriin aad ku darto:
1. Tuwaal / shukumaan / shukumaan / tuwaal qubeyska
Musqulaha waxaa badanaa loogu talagalay inay noqdaan meel bannaan oo aan hawo lahayn dhinacyada oo dhan. Marar badan shukumaannada qoyan ee habeenkii hore waxay yeelan doonaan ur gaar ah haddii ayan ku qalalin habeenki. Dadka qaarkiis waxay u barteen inay lacag kaydsadaan oo diyaar uma aha inay beddelaan tuwaallada badanaa. Muddo dheer, tuwaalku ma aha oo kaliya inay leeyihiin dareen dheg dheg ah, Xitaa caariyaysi ayaa soo muuqday, oo aad u xumaa.
TALO: Ulaha ha u dhigin meel aad ugu dhow derbiga. Qoysaska leh qoysas balaaran, tixgaliso sagxadaha dhaadheer ee dhaadheer ama kuwa dhaadheer si aad u kordhiso meesha sudhan.
Halkaan waxaa ku yaal dalool weyn: Ha arag qaabka cirifka laba-lakabka oo ah mid wax ku ool ah oo meel bannaan ku keydin kara. Haddii masaafada udhaxeysa labada ulood ay aad u cariiri tahay, labada lakab ee tuwaal ma qalali doonaan, taas oo ka xun qaabka hal-cirifka.
Hadda suuqa waxaa yaalla rakibayaal shukumaan koronto ku shaqeeya, oo kululeyn kara oo qallajin kara tuwaallada, laakiin qiimuhu wuu ka badan yahay, kuwa lehna xaaladaha ayaa iibsan kara, taasoo si weyn u xoojineysa farxadda!
2. Dambiisha / Dambiisha geeska
Xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo badan oo la dhigayo aagga qubayska: shaambo, qaboojiye, maaskaro timo, jelwac, qashin, nadiifiyaha wajiga, saliidda wax lagu nadiifiyo, iwm, oo lagu daray waxaa loogu talagalay ragga, haweenka, iyo dhallaanka, iyo wadarta tirada waa X2. Waqtigaan, aag dhexe oo kaydinta ayaa loo baahan yahay. Dambiisha geesku waa xulasho wanaagsan. Adeegso geeska aagga qubayska si aadan u qaadan boos aad u badan. Waa meel la gaari karo oo sahlan in la qaato marka la qubaynayo.
TALO: Dambiiloodyada dambiilaha guud ee wadajirka ah waxay leeyihiin hal lakab iyo laba-lakab, noocyada qaarna waxay leeyihiin saddex-lakab iyo afar-lakab. Guud ahaan, labada lakab waa qaabka ay dad badani doortaan. Dhalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba waxay hanan karaan qiyaastii 8-12 dhalo, kuwaas oo asal ahaan dabooli kara baahida qoyska ka kooban saddex qof.
Intaas waxaa sii dheer, haddii aadan haysan geeska ku habboon ee rakibidda, waxaad sidoo kale dooran kartaa dambiisha keydinta ee darbiga lagu dhajiyay ee hoosta ka muuqata, oo leh qoto dheer 12 ~ 15cm, si aad u dhigto alaab aan si xad dhaaf ah uga soo bixin derbiga oo aanad ku xadgudbin booska waxqabadka.
Shaambo, jubbada qubeyska iyo alaabada kale ka sokow, aagga qubaysku sidoo kale ma laha meel la dhigo waxyaabo yaryar sida koofiyadaha qubeyska, tuwaallada lagu maydho, burushyada qubeyska, iyo burushka shaambo. Dad badan ayaa si toos ah ugu dhejiya qubeyska. Daldalaada, waxay umuuqataa mid aad uxun. Maalmahan, qaar dambiilood oo ka mid ah dambiisha geeska qubeyska ayaa baahiyahaas tixgelinaya, oo waxay ku daraan qabatooyin, meelaha biyaha diidan iyo shaqooyinka kale ee alaabada. Waxaad dooran kartaa hadba baahidaada marka aad wax iibsaneyso.
Dabcan, shaqada laalaadda sidoo kale waxaa lagu xaqiijin karaa iyadoo lagu darayo qabatooyin. Waad ku iibsan kartaa adigoo raadinaya ereyada muhiimka ah sida "S hook" iyo "single hook".
3. Cadka haya
Sida magaca ka muuqata, waxaa loo isticmaalaa in lagu dhejiyo tuwaal waraaqo ah. Noocyada dhaqameed ee suuqa ayaa asal ahaan ah sida lagu muujiyay labada nooc ee soo socda. Midka saxda ahi wuxuu leeyahay guddi aan biyuhu ka adkaan karin oo aan siigada u adkayn karin, laakiin dhinacna ma celin karo, markaa saameyntu ma fiicna, oo lagu daray hadda qof kastaa wuu ogyahay In lakala saaro qalalan iyo qoyan, shaqadani waxay noqoneysaa xitaa dhadhan la'aan.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, telefoonnada casriga ahi kama bixin gacmahooda. Soo-saareyaal badan ayaa bilaabay inay ku daraan dhufto-yada bakhaarada kuwa haysta nudaha. Hawshani runtii way ku habboon tahay. Waxaa jira meel loogu talagalay taleefannada gacanta marka musqusha aadayso. Ayaa adeegsada?
4. Burushka musqusha
Noocan cadayga musqusha ee darbiga lagu xidho waa wax caadi ka ah suuqa, waxaana lagu qalabeeyaa muraayad barafaysan oo dhalaalaysa, taas oo ah qaab taariikhi ah. Si kastaba ha noqotee, waxa ka sii darran ayaa ah in koobku uu huruud noqon doono muddo dheer kadib, iyo in si aan mugdi ku jirin loo arki doono qashinka iyada oo loo marayo maqaarka hufan, ee laga dareemayo karaahiyo aad u weyn; qaabka darbiga lagu dhejiyo ma fududa in la beddelo.
Marka la barbardhigo moodooyinka darbiga lagu dhajiyo ee caadiga ah, waxaan doorbidaa alaabada sida burushyada musqusha oo si dabacsan loogu dhaqaajin karo. Tusaale ahaan, nooca sagxadda taagan ee hoos ka muuqda, haanta gudaha ayaa gebi ahaanba la soo bixi karaa, taas oo ku habboon nadiifinta oo ay fududahay in la beddelo markii la xidho; muuqaalka sidoo kale waa mid heer sare ah Atmosphere, ha lumin lacagta galaaska.
2. Falanqaynta maaddada iyo faa iidooyinka iyo faa'iido darrada qalabka musqusha
Jawiga qoyaanka badan ee musqusha, qalabka wanaagsan ayaa go'aamiya khibrada iyo nolosha qalabka musqusha. Afarta shey ee caadiga ah ee suuqa ku yaal ayaa la dhihi karaa waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaarooyin u gaar ah, midkoodnana ma fiicna.
Waxyaabaha soo socdaa waa falanqayn adiga mid mid, waxaad u kala dooran kartaa hadba xaaladahaaga iyo baahiyahaaga.
1. Naxaas naxaas ah
Faa'iidooyinka: cimri dherer wanaagsan, muuqaal wanaagsan, qiime sare, darajo sare
Faa'iido daro: qaali
Naxaasku ma aha 100% naxaas, laakiin waa daawaha naxaasta ah, sida H59, H62 copper (nambarku waa nuxurka naxaasta). In kasta oo qiimaha alaabta ceyriinka aysan hooseyn, haddana qiimaha wax lagu socodsiiyo sidoo kale waa sare, laakiin maadaama naxaasku leedahay dhejis dhejis ah oo sarreeya, isticmaalka muddada-dheer ma sahlana in laga sifeeyo, wuxuuna leeyahay cimri dherer wanaagsan. Noocyo badan oo waaweyn oo ku yaal musqusha ayaa doorbida walxaha naxaasta ah ee loogu talagalay habka korantada, iyo muuqaalka badeecaddu waa mid dhalaalaya. , Mid hodan ku ah qaab dhismeedka, ayaa la dhihi karaa waa xulashada tayada-dhamaadka sare.
2. Xarkaha birta ahama
Faa'iidooyinka: sicir dhexdhexaad ah, xoog wanaagsan iyo adkeysi
Faa'iido darrooyinka: muuqaalka iyo muuqaalkuba waa dhexdhexaad
Qalabka birta ah ee aan xarka lahayn ayaa aad u badan. Waxaa jira laba nooc oo kala ah 201 iyo 304. Waxay ku kala duwan yihiin halabuurka, waxqabadka iyo qiimaha. 201 waxay leedahay qiimo jaban iyo waxqabad aan degganeyn. Way fududahay inaad miridho markii lagu meeleeyay jawi qoyan muddo dheer musqusha; 304 wuxuu leeyahay qiime sare iyo tayo qaraabo ah. Waxqabadka ayaa kafiican, ma sahlana in lagu miridho deegaan qoyan.
Dusha sare ee maaddada 201 waxay u baahan tahay in koronto lagu qoro, walxaha 304 badiyaa waa la cadaydaa, laakiin maadadda nikkel ee ku jirta awgeed, dusha sare ayaa laga dareemayaa hurdi yar. Halkan waxaa lagu xusay in koronto-bixinta dusha sare ee birta birta ah ay ka qurux badnaan doonto, laakiin ma sahlana in la kala saaro faa'iidooyinka iyo qasaaraha (201 ama 304). Waa tan talo soo jeedin: 304 waa inay raadisaa xarigga siligga ama nadiifinta dusha sare. Nooca electroplating waa inuu soo saaraa soo saare weyn, maaddaduna waxay noqon doontaa mid hufan.
Guud ahaan, xoogga, shaqeynta, iyo adkeysiga birta birta ah ee birta ka sameysan weli wey wanaagsan yihiin, laakiin muuqaalka iyo muuqaalka ayaa ka liita muraayadaha naxaasta ah.
3. Qalabka aluminium
Faa'iidooyinka: raqiis, iftiin iyo adkeysi
Faa'iido darrooyinka: Qaab keli ah, shaqo-xumo, mugdi-dheer oo deegaanka qoyan
Aluminiumka booska laftiisu miisaankiisu waa khafiif, dhumucdiisuna iyo dhalaalkeeduna aad buu uga xun yahay tan dahaadhka naxaasta ah. Guud ahaan waxaa laga sameeyaa lacag cad oo matte ah. In kasta oo qaabku celcelis yahay, laakiin guud ahaan culeyskiisu wuu wanaagsan yahay mana sahlana in la qaabeeyo. Qiimuhu wuu hooseeyaa, waxaadna iibsan kartaa qalab dhan oo musqusha ka kooban laba illaa saddex boqol.
Jabaan gudaheeda, aluminiumyada aluminium ee soo saarayaasha qaarkood waa kuwo aad u fiican, kharashkuna ma hooseeyo; laakiin Shiinaha, sababta oo ah heerka sare ee dhibaatada ee ka shaqeynta (aluminiumku wuxuu leeyahay dhibic sare), qaabku sida caadiga ah wuu ka fudud yahay oo farsamada ayaa qallafsan, marka la barbar dhigo badeecadaha kale ee xiisaha leh Waxaa loo yareeyay alaabada dhammaadka hoose. In kasta oo alaabada aluminiumku aysan miridh noqon doonin, way oksijiin doonaan oo way madoobaanayaan haddii ay ku gaadhaan huurka badan musqusha muddo dheer.
Sababta wax loo iibsado: Waxaa jira xaddidaadyo miisaaniyadeed oo la iibsado
2. Zinc dahaarka dawada
Faa'iidooyinka: qaabab kala duwan, ka raqiisan naxaasta
Faa'iido darrooyinka: samee qalab dheeri ah, dahaadhku wuu dhici doonaa waqti dheer ka dib
Daawaha Zinc wuxuu leeyahay balaastig adag, qiimo jaban oo naqshadeynta geedi socodka sida foorarsiga (qiyaastii 2/3 naxaas ah), waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa aagga qalabka musqusha. Sababtoo ah liidashada liidata ee zinc alloy ee lakabka electroplated, in kasta oo muuqaalka wax soo saarka zinc daawaha markii uu cusub yahay ku dhowaad waa isku mid sida tan electroplating naxaas, cimri dherer aad u xun. Waqti dheer kadib, lakabka dahaadhku wuu dhacayaa wuuna diiri doonaa. Waxaa badanaa loo isticmaalaa jirka ugu weyn Shiinaha. Qalabka, sida gacmaha, daboolka flange, iwm, si loo yareeyo kharashyada.
Wadamada shisheeye, noocyada ugu sareeya qaarkood sidoo kale waxay leeyihiin badeecado daawaha zinc saafi ah (GROHE, Hansgrohe), laakiin Shiinaha, soosaarayaasha yar ayaa guud ahaan isticmaala aaladda zinc oo ah jirka ugu muhiimsan ee santuuqa. Markaad wax iibsaneysid, fiiro gaar ah u yeelo kala soocidda ganacsatada aan damiirka lahayn. Marooyinka isku-dhafan ee loo yaqaan 'Zinc alloy pants' ayaa loo iibiyaa sida xargaha naxaasta.
Sababta wax iibsiga: qiimo dhexdhexaad ah iyo qaab wanaagsan.
Tusmada talo soo jeedinta: ★ ★ ☆
3. Talo bixin nooc ah iyo falanqaynta iibsiga isbarbardhiga
Waxaa jira waxyaabo badan oo aqoon ah, laakiin qof kastaa ma jecla, markaa sidee loogu iibsadaa qalabka musqusha ee isha?
Sida hadalka loo yiri, waxaa jira takhasus gaar ah warshadaha farshaxanka, iyo summad shaqo wanaagsan ka qabata dhoobada ayaan daruuri shaqo fiican ka qaban qalabka. Haddii aad rabto qiimo lacag oo aad nuugi karto roob iyo sayax, waa inaad marka hore ogaatid noocyada ku habboon alaabada musqusha. Ma soo bandhigi doonno noocyada shisheeye ee dhaadheer. Noocyadaas asalka ah ee Jarmalku waxay ku kici karaan kumanaan, iyo tuwaalka shukumaanku wuxuu ku kici karaa 3,000, taas oo runtii ah duco la'aan Halkan waxaa ku yaal noocyo caan ah oo caan ah oo caan ah oo dareemaya in qiimaha uu dhexdhexaad yahay.
1. Dilang: 20-kii sano ee la soo dhaafay waxaan si xirfad leh u sameynayay qalabka musqusha. Waxaan horay ugu soo booqday qolkooda bandhigga safarada shaqo. Kororsiyeynta waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid aad u horumarsan. Meelayntu waa mid heer sare ah, sidaa darteed qalabka loo isticmaalo qalabkooda guryahooda asal ahaan waa naxaas, qiimaduna ma ahan mid raqiis ah, laakiin marka la barbardhigo kumanaanka noocyada ajaanibta ah sida GROHE, taasi runtii waa wax aan qiimo lahayn.
2. Moen: Iibsashada qasabadaha iyo qubeyska ayaa mudan in lagula taliyo, iyo xakamaynta tayada badeecada si wanaagsan ayaa loo qabtay. Qasabadaha ay ka kooban yihiin, qubeyska iyo qalabka kale, marka laga reebo naxaasta, inta badan waa bir bir ah, laakiin qiimaha ayaa ka sarreeya.
3. Hengjie: Inta badan waxay ku hawlan yihiin alaabada fayadhawrka dhoobada ah, iyo sidoo kale suumanka qalabka. Dad badan ayaa iibsaday suuliyadoodii waxayna arkeen inay wanaagsan yihiin. Qalabyo kale ayaa sidoo kale laga iibsaday gurigiisa, oo tayada ayaa ka sarreysa celceliska.
4. Yading: Markaan ka hadlayo qalabka musqusha, waxaan aaminsanahay in qof walbaa aqoon u leeyahay sumaddan. Badeecadahooda badankood waa la dhoofiyaa, qiyaastii 70% ka mid ahna waxaa loo dhoofiyaa Yurub iyo Mareykanka. Waxay shaqo fiican ka qabtaan xakamaynta tayada, oo ma jiraan wax xayeysiis gudaha ah iyo waxqabadyo.
5. Songlin: Waxay ku bilaabatay sidii OEM waxayna taariikh ku leedahay in ka badan 20 sano warshadaha qalabka fayadhowrka. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxay ku jirtay suuqa gudaha waxayna ku aragtay sumcad waqti ka waqti. Markaan fiirinayo qaabka iyo qiimaha, waxay ila tahay inay fiicantahay.
6. Jiu Mu: Xayeysiisyo badan ayaa jira waana mid caan ah. Asal ahaan, waxaa jira dad sheega Jiu Mu wixii ku saabsan alaabta nadaafadda ee aad iibsato. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qalabka waa caadi, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad ka iibsato dukaanka calanka, ganacsatadana way illoobi doonaan.
7. Kabe: Shirkad Wenzhou ah, gaar ahaan qalabka musqusha oo ku lug leh qalab dhamaystiran, nooc kasta oo agab ah, qiimaha sidoo kale waa mid aad u jaban.
8. Gujis: wuxuu ku fiican yahay ka baaraandegidda naxaasta, birta aan lahayn iyo kuwa kale ee loo tuuro. Qalabka ugu weyn ee shirkaddu leedahay ee musqusha, laakiin badeecadooda ugu caansan waa daadinta dhulka !!! Wali waxay ku leedahay sumcad wanaagsan e-commerce, oo qiimuhu waa dhexdhexaad.
U soo qaado hal shey tusaale ahaan si aad u falanqeyso sida loo doorto suumanka isku shey iyo noocyo kala duwan:
1. Meel bannaan oo aluminium ah - dambiil gees-gees leh
Markaan ka hadlayo suumanka aluminium ee bannaan, shaqsiyan waan jeclahay Kabe.
Qiimuhu waa hal dhinac. Badeecada waa la isbarbar dhigi karaa dambiisha dhabta ah ee koleyga musqusha ee sawirka kore: isla iftiinka hoostiisa, dambiisha geeska Kabe waxay u egtahay mid jilicsan oo cadaan ah, xoogaa qaro weyn leh, dushana ka siman, mana jiro ciid cad oo taabashada ah. Dareenka badarka; sagaalka dambiil ee geesaha xanaanada xoolaha waxay u muuqdaan kuwo khafiif ah, oo laga yaabo inay ugu wacan tahay dhibaatada gaarsiinta degdegga ah. Weli waxaa jira xoogaa xoqid dusha sare ah, qaabdhismeedkuna xoogaa wuu daciif yahay, laakiin nasiib wanaag, godad badan ayaa leh saameyn bullaacad ah
2.304 birta-musqusha haysata ahaanta
Xarkaha birta aan xarka lahayn ayaa lagula talinayaa in lagu daaweeyo nalka muraayadda iyo sawirka siligga. Daaweynta muraayadda ka dib, dusha sare ee santuuqa ayaa muujin doona muuqaal dhalaalaya sida elektaroonigga, taas oo ka sii qurux badan, laakiin sidoo kale sababta oo ah birta birta ah ee dhalaalaysa ayaa qafiifnaan doonta. Dusha sare ee cadaygu waa jaalle khafiifa, oo leh dareen bir culus. Sida quruxda ama maahan, waxay kuxirantahay shaqsiga.
3. Naxaas naxaas ah - shukumaan shukumaan ah
Haddii lagugula taliyo astaanta, Dilang shaqo fiican ayuu qabtay! Dahaarka dusha sare ee shaabadoodu waa sida ugu fiican ee qiimihiisu yahay. Intaa waxaa dheer, dhumucda maaddada waxaa laga qiyaasi karaa culeyska. Marka loo fiiriyo, dhumucda dhumucdiisuna waxay u dhowdahay inay xumaato; sidoo kale waxaa jira cabirka, sida kor ku xusan, si loo fududeeyo qalajinta tuwaallo badan, dhererka iyo kala dheereynta ulaha waa inay ahaadaan kuwo ka dheer / ka weyn, Dhererka usha waa caadi lix illaa toddobo boqol, iyadoo ku xiran deegaanka aad adigu iska leedahay musqusha.
Ugu dambeyntii, soo koobid
Haddii aad rabto inaad iibsato qalabka musqusha, waxaad dooneysaa qiimo ah 70 $ oo tayada ayaa la damaanad qaaday. Waxaad ka baran kartaa Kabe. Miisaaniyad sare iyo dareen raaxo leh, fiiri Dilang. Wax badan ma dhihi doono, waxaan rajeynayaa in wax kasta oo aad bixiso ay mudan yihiin in la helo.
Hore:: Tilmaamaha Ugu Dambeeya ee Sida Loo Xulo 6 Nooc Oo Ka Mid Ah Qalabka Qalabka Musqusha Next: Dib-u-eegista Faucets Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee Buuxiyeyaasha Dheriga